Ikhalenda Kwifashoni ye-kaleidoscope efana nale, ikhalenda enemizobo enqamlezileyo egxothwe ngeepatheni zemulticolor. Uyilo lwazo ngephethini yemibala ezinokuthi zilungiswe kwaye zibhalwe buqu ngokutshintsha kwe-odolo yamaphepha kubonisa ubunzima bokuyila kwe-NTT COMWARE. Isithuba sokubhala esininzi sinikezelwe kwaye imigca elawulwayo ithathela ingqalelo ukusebenza kwayo ewenza ugqibelele njengekhalenda yeshedyuli onokufuna ukuyisebenzisa ekuhlobiseni indawo yakho.
Isitulo Segumbi Lokuhlala
Isitulo Segumbi Lokuhlala Digits okanye iibibers, inkqubo yoyilo lwangoku. Sonke singabaqalayo kodwa abanye bethu kufuneka basebenze kuyo. Abaqulunqi bokuqala bajonga zonke iindlela ezikhoyo kunye nokufunda ezinye. Ngexesha (~ iiyure ezili-10,000) sifumana izibonelelo (-ies) eziphakamisa / ezenza / zikhulise / zibenze bube buhle umdlalo wethu. Ke, ndichukumisekile ngumdla okhoyo ngoku kwimithombo yeendaba ephakamisa ukuba eyona nto ibaluleke kakhulu yokwakha ibhloko yedijithali, ilawulwa ngokulula. Idijithali ayisiyunithi enika ubomi, ukumane usijikelezisa ukuya ngaphantsi kwehlelo elisezantsi elincinci elincinci kunefibre. Uyilo okungenani ubuncinci, i-splinters kunye nefibre.
Ibhedi Yesofa I-Umea sisofa esinobunzima kakhulu, esibonakalayo esinebhedi kunye nenetafile elungiselelwe abantu abathathu abahleliyo kwaye abantu ababini bakwindawo yokulala. Nangona isixhobo esinezixhobo ziyinto ecocekileyo yokucofa, eyona nto inokuyilwa ngokuphuma kwimigca ehambelanayo kunye neendlela zokwenza le fenitshala.
Isitulo Sokuphumla I-YO ilandela imigaqo-siseko ye-ergonomic yokuhlala ngokulula kunye nemigca yejiyometri ecocekileyo eyenza ukuba unobumba u "YO". Kwenza umahluko phakathi kwento enkulu eyenziwe ngamaplanga “eyindoda” kunye nelaphu eliqinisekileyo, eliyi- “fem” elihleliyo kwesihlalo kunye nomva, elenziwe nge-100% izinto ezihlaziyiweyo. Ukuxinana kwendwangu kufezekiswa ngokudityaniswa kweefayile (ebizwa ngokuba yi "corset"). Isitulo sokuphumla sidityaniswa nesitulo esiba yitafile esecaleni xa ijikeleze ama-90 °. Uluhlu lokukhethwa kwemibala lubavumela bobabini ukuba bangene ngokulula phakathi kwezitayile ezahlukeneyo.
Umshini We-Tea Ozenzekelayo Ngokupheleleyo
Umshini We-Tea Ozenzekelayo Ngokupheleleyo I-Tizira ezenzekelayo ngokuzenzekelayo yenza lula inkqubo yokulungiswa kweti kwaye ibeke inqanaba lasemoyeni lokwenza iti. I-tiyi engashukumiyo igcwaliswa kwiiJars ezikhethekileyo apho, ngokukhethekileyo, ixesha lokuphuza, ubushushu bamanzi kunye nenani letiya linokulungiswa ngokukodwa. Umatshini uyaziqonda ezi zisetingi kwaye ulungisa iti efanelekileyo ngokupheleleyo kwigumbi leglasi elibonakalayo. Nje ukuba itawuli ithululwe, inkqubo yokucoca ngokuzenzekelayo iyenzeka. Itreyi edityanisiweyo ingasuswa ngokukhonza kwaye iphinde isetyenziswe njengesitovu esincinci. Nokuba ikomityi okanye imbiza, iti yakho igqibelele.
Indawo Ifumaneka kwisithili saseKuwait kwisithili esixakeke kakhulu, iziko le-yoga ngumzamo wokuhlaziya umgangatho ongaphantsi komhlaba weJassim tower. Indawo le projekthi ibingaqhelekanga. Nangona kunjalo yayililinge lokusebenzela abafazi bobabini ngaphakathi kwemida yedolophu kunye nakwiindawo zokuhlala ezingqonge. Indawo yolwamkelo kwiziko ingena phakathi kunye neendawo eziitshixwayo kunye nendawo yeofisi, ukuvumela ukuhamba kwamalungu ngokufanelekileyo. Indawo ye-Locker ke ilungelelaniswe nendawo yokuhlamba umlenze ebonisa umda 'wezihlangu ezikhululekileyo'. Ukususela ngelo xesha kuya phambili kukho i-corridor kunye negumbi lokufunda elikhokelela kumagumbi amathathu e-yoga.
Ikhalenda Isitulo Segumbi Lokuhlala Ibhedi Yesofa Isitulo Sokuphumla Umshini We-Tea Ozenzekelayo Ngokupheleleyo Indawo